एएफसीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आर्मी, कस्तो तयारी र स्तर आवश्यक ? « Lokpath
२०७७, १३ पुष सोमवार १५:५३
एएफसीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आर्मी, कस्तो तयारी र स्तर आवश्यक ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १३ पुष सोमवार १५:५३
काठमाडौं । शीर्ष डिभिजन खेल्ने नेपालको विभागीय टोलीले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट केही दिन अगाडि मात्र एएफसी लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । ए डिभिजन लिग खेलेका १४ टोली सबैले मान्यता लिन पत्रचार गरे पनि केही मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा एएफसीले सबैलाई मान्यता दिएन ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबले मान्यता पाँएसँगै अब आर्मीले मात्रै एएफसीका प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भएको छ । पाएको मान्यतालाई जोगाउनलाई पक्कै सहज छैन । कस्तो तयारी र स्तर आवश्यक हुन्छ त ?
कुनै समय दक्षिण एसियामा बलियो मानिने नेपाली फुटबल पछिल्लो समय विभिन्न उतारचढावले गर्दा लयमा नदेखिनु तितो यथार्थ हो । एएफसीका प्रतियोगितामा बलियो चुनौति दिँदा दर्शकको वाह वाह बटुल्ने गरेको नेपाली क्लबले पछिल्ला केही संस्करण प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन । कहिले विनाशकारी महाभूकम्प त कहिले फुटबल भित्रको आन्तरिक किचलोले नेपाली फुटबल भूमरीको भूंग्रोमा फस्यो ।
तर पनि विभागीय टोली हुनुको अर्थले आर्मीले एएफसीको लाइसेन्स पाउन सक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता चुनौती नहुने फुटबलका विश्लेशक सञ्जीव मिश्रले बताए ।
विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी पछिल्लो पटक सम्पन्न शहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको उपविजेता हो । मोफसलका केही प्रतियोगितामा उपाधि जित्दै अन्य क्लबलाई बलियो चुनौति दिन आर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यति सहज भने छैन । त्यसो त विभागीय टोलीमा राष्ट्रिय टोलीको जर्सी पहिरिने खेलाडी पनि समावेश भएका छन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही प्रतियोगितामा अनुभव बटुलिसकेका छन् । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागि हुन बलियो पक्ष हुनेछ । अन्य क्लबलाई भन्दा आर्मीलाई साख जोगाइ राख्न वातावरण तुलना गर्दा केही सहज छ ।
आफ्नै मैदान, खेलाडीले पाउने सेवा र सुविधा आर्मीका लागि थप हौसलाका पाटा हुन । पूर्वाधारको अधिकतम सदुपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्लबलाई टक्कर दिने तयारीमा जुट्नु मिहिनेत जरुरी हुन्छ । यसका अलावा आर्मीलाई एएफसीले गरेको विश्वास र फुटबल विकासमा राखेको अपेक्षालाई पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुको विकल्प छैन ।